Ahoana no tianao tahaka ny lehilahy?
Vehivavy mahafinaritra! Aoka ianareo zazavavy, ankizivavy, vehivavy, renibeny - ho tsara tarehy foana ianao! Na inona na inona vanim-potoana, miaraka amin'ny mofomamy na tsy misy, miakanjo tsara na maotina, miaraka amin'ny volo marevaka na volo fisalasalana - tsy misy dikany izany. Manintona anao amin'ny natiora ianao. Na dia miezaka ny ho tsara tarehy kokoa aza ianao, ary na inona na inona ataonao amin'ny bika aman'endrinao - dia mbola tsy hanafina ny hatsarana voajanahary ianao. Ny fanintanjahanao dia mitoetra ao anatinao, tsy azo afenina na aseho izany - mamelatra anao na aiza na aiza misy anao!
Ahoana ny fomba hitia vahiny?
Ny lehilahy tsirairay dia mahatsapa ny fisian'ny vehivavy. Manova ny fitondran-tenany mihitsy aza izy, arakaraka ny karazana vehivavy manaraka. Ny vehivavy sasany dia mino fa misy lehilahy iray mitondra ny fomba nenti-nananganany azy, tahaka ny ataony mandrakariva. Tsia, tsy izany. Tadidio fa misy lehilahy iray mitazona vehivavy iray amin'ny fomba hamelany ny tenany mba hoentina.
Ahoana no itiavan'ny lehilahy mpanankarena iray?
Ny anjara asany manan-danja dia taratry ny fahatsapana voalohany fa ny vehivavy dia mitafy lehilahy. Ireo solontenan'ny firaisana ara-nofo mifanohitra amin'ny atidoha dia mandinika ny fomba nanoloran-tenan'ilay tovovavy, araka ny nametrahany azy. Ary amin'ny ankapobeny, eo amin'ny dingana voalohan'ny fifandraisana, ilay lehilahy dia tena manintona. Mamolavola ny famintinana mifototra amin'ny fomba fihevitr'ilay zazavavy amin'ny teniny sy ny asany izy. Ny fihetsik'ilay tovovavy dia heverina ho fankatoavana na tsy fankasitrahana tsy miangatra. Jereo ny fitondran-tenanao.
Tianao ahoana ny toetranao?
Toa tsotra ity fitsipika ity, saingy indraindray dia sarotra ny miezaka. Te ho tsara foana izahay. Noho izany, izahay, vehivavy, no miondrika amin'ny hoditra mba hisarihana sy hitadiavana ilay lehilahy izay tianao. Afaka mampiasa ny karazana tricks rehetra isika, mandray andraikitra hanatanteraka andraikitra samihafa, andramo ny tarehin-tsoratra ... Izany rehetra izany dia satria mieritreritra isika fa toy ny antsika, tsy afaka ny ho voapoizina amin'ny foto-kevitra momba ny fitsaohana isika. Ary avy eo ny zavatra mahatsiravina indrindra dia mitranga - ny fahadisoana iraisan'ny vehivavy. Manomboka very ny maha-zava-dehibe antsika, ny maha-izy antsika. Ho an'ny fahasambarantsika, ny lehilahy dia mahatsiaro tena ho tsy mahay mifandefitra ary tia antsika marina.
Inona no tokony hatao mba hampifaliana olona?
Faly be ilay lehilahy tianao hampafaliana. Faly ny olona rehefa liana amin'ny olona liana. Mametraha fanontaniana, miaraha amin'ny resadresaka. Mitondrà azy amim-pahamendrehana.
Antsoy azy amin'ny anarany. Ny anaran'ny olona no feo tsara indrindra ho azy amin'ny fiteny iray.
Ahoana ny fomba itiavana lehilahy iray ao am-piasana, na ahoana no hampifaliana ny lehiben'olona
Mahaiza mihaino. Amporisiho ilay olona hiresaka momba ny tenany. Henoy tsara, tsarovy ny fampahalalana rehetra. Amin'ny fotoana tsy ampoizina dia mety hanampy anao izany.
Resaho hoe inona no mahaliana anao.
Ahoana ny itiavanao olon-dehibe?
Ary aloha, tokony ho matoky tena ianao. Ary, faharoa, voalohany, ny vehivavy dia tokony hahaliana. Mahaliana fotsiny ny zavatra iray, afaka mitaky ny fiaraha-miombon'antoka aminy izy.
Ahoana ny fomba itiavana ny mpivady?
Ny zavatra tena niavaka anao. Ny maha-tokana anao dia afaka miseho amin'ny zavatra rehetra: amin'ny fomba fitafiana, fihetsika, fomba, hevitra - amin'ny zavatra rehetra! Aza adino ny tenanao. Tsarovy izany, ohatrinona no tsy tianao.
Firy isan-karazany no manoroka ny orsa?
Vehivavy tena izy, inona no tiany?
Tiako ilay lehilahy - inona no tokony hatao?
Ahoana no ahitanao lehilahy malala?
Noho ny fandrotsahana koba amin'ny fitomboana?
Fampiroboroboana ny fahaiza-mihira amin'ny ankizy any am-pianarana
Ny biography of Kate Winslet
Fahamaizinana eo amin'ny maso - antony
Wedding amin'ny lokon'ny Marsala
Labyrinthitis - soritr'aretina, fitsaboana
Apple Fletcher - ny fomba tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso ny bibikely
Mofomamy mavokely mena
Ahoana ny fifohana sigara?
Antonio Banderas - Perfume for Women